Arimaha Bulshada – Page 10 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Ku Dhawaad 400 oo Qoys kana mid ah Qoysaska Danta Yar Ee ku Sugan Degmada Buula Burde Ayaa Maanta
Daawo Muuqaalka:70 Dhalinyaro Soomaali ah oo Dalka Mareykanka Laga Soo Musaafuriyay ayaa muqdisho Soo Gaaray
Faafaahin Ka Soo Baxeysa Qarax ka Dhacay Kismaayo
Meydadka dalxiisayaal ajaaniib ah oo laga helay xeebaha magaalada Marko
(SAWIRO): Meydadka Labo ruux oo laga helay meel ku dhow Hotel Peace
Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
WAR CUSUB: Shariif Xasan oo Amar Culus dul dhigay Xildhibaanada K/Galbeed kadib Go’aankii maanta…
December 15, 2016	Leave a comment 28 Views
Xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda maamulka Koonfur galbeed Somalia oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa amar lagu siiyey ineysan qaadan kaararka aqoonsiga oo bixintoodu ay ka socoto xarunta Villa Baydhabo. Qaar ka mid ah xildhibaanadan oo magacooda ka gaabsaday ayaa sheegay in amarkan uu ka yimid Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Somalia Shariif Xasan Shiikh Aadan oo haatan ku ...
Kooxda Daacish oo looga awood roonaaday Geeska Afrika (AKHRISO)
December 14, 2016	Leave a comment 32 Views
Warbixin cusub oo laga qoray Kooxda Daacish ayaa lagu xusay in Ururka looga awood roonaaday Geeska Afrika. Xoogaga Ururkan oo markii hore ka go’ay Xarakada Al Shabaab ayaa waxey ka aas aasmeen Degaanada Maamulka Puntland. Si ay u muujiyaan awoodooda ayaa Ururkaan waxey la wareegeen Degmada Qandala ee Gobolka Bari, halkaasi oo in muddo ah ay ku sugnaayeen. Balse militariga ...
SAWIRO: Ciidamadii Mareynkanka uu ku laayay G/kacyo oo taalo loo dhisayo..
December 14, 2016	Leave a comment 31 Views
Maamulka Galmudug ayaa u dhaqaaqay in taalo loo dhiso Ciidamadii dhawaan duqeynta ay ku laayeen Mareynkanka,kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka Jeexdin ee Gobolka Mudug. Guddoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barre ayaa dhagax dhigay goobta taalada laga taagayo. Goobta Taallada laga dhagax dhigay ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qurbo joog badan oo kasoo jeeda degaanada Maamulka Galmudug. Dhismaha ...
Diyaarad si deg deg ah Garoowe uga qaaday CC & Warar sheegay in…
Wararka laga helayo magaalada Garowe ayaa sheegaya in diyaarad gaar ah ay halkaasi saaka ka qaaday Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay diyaarad gaar ah u dirtay Cumar C/rashiid isagoo u duulay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Ujeedka socdaalka Cumar C/rashiid ayaa la xiriira Doorashada Madaxweynaha dhawaan la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya oo ...
SAWIRO: Mas’uuliyiin ka tirsan Guddiga doorashada daban Somalia oo lagu arkay Chana+Ujeedka..
December 14, 2016	Leave a comment 35 Views
Madaxda ka tirsan Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka (NIEC) ayaa kasoo qeyb qaatay soona arkay doorashooyinka ka dhacay wadanka Ghana si ay casharro waxtar leh uga soo qaataan islamarkaana u qorsheeyaan uguna diyaar garoobaan dhinaca doorashada hal qof, hal cod ee 2020 . Labo sarkaal oo kala ah Guddoomiye ku-xigeen NIEC, Sayid Ali Sheikh Mohamed iyo Guddoomiyaha Guddiga Mudane Said Hashi Warsame ...
Akhriso: Tirada Xildhibaanada lagu doortay P/land, J/land, Galmudug, Hirshabelle & K/Galbeed oo la laalay (Liiska oo buuxa)
December 14, 2016	Leave a comment 47 Views
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka ayaa ugu danbeyn laalay 11 kursi oo ka mida aqalka hoose, kuwaasoo lagu soo doortay 4 magaalo Goboleed. Maamulka K/Galbeed ayaa ugu badan oo 5 xildhibaan la laalay kuraastii ay ku guuleyteen, waxaana ku xiga Puntland iyo Hirshabeelle oo min laba kursi ah iyo Galmudug oo hal kursi laga laalay. 11 Kursi ee natiijadooda la laalay ...
Ahlu Sunna si lama filaan ah jawaab uga bixiyay Gaari looga qabsaday Degmada….
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa jawaab kulul ka bixiyay wararka la xiriira Gaari hub u siday Degmada Guriceel lagu qabtay Duleedka Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan. Madxweyne ku xigeenka Maamulka Ahlu Sunna, Xasan Maxamed Warsame ayaa waxuu shaaca ka qaaday in been abuur uu yahay uu yahay hadalka ku aadan Gaari looga qabsaday Duleedka Degmada Maxaas. Mr. ...
War naxdin leh & meel ka tirsan Somalia oo mar qura 30-ruux ku geeriyootay..
December 14, 2016	Leave a comment 33 Views
Wararka naga soo gaaray deegaano hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dad ay u geeriyoodeen Cudurka shuban biyoodka ee halkaasi ka dilaaacay. Ku dhawaad 30 ruux ayaa u geeriyootay Cudurkaasi Shuban Biyoodka oo isugu jira Carruur iyo dad da’ ah. Sida uu warbaahinta u xaqiijiyay Guddoomiyaha Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Xuseen Afrax , tuulooyin ku ...
Maxaad ka ogtahay siduu yahay xiriirka Imaaradka & Somalia?+Jawaabta Xasan Sheikh..
December 14, 2016	Leave a comment 42 Views
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka jawaabay hadal maalmihii u danbeeyay la isla dhexmarayay oo ku aadan halka uu ku danbeeyay xiriirka Somalia iyo Imaaradka carabta. Wuxuu sheegay Xasan Sheikh in hadal dayaacad iyo been abuur ay yihiin waxa la isla dhexmarayo ee ku aadan inuu xumaaday xiriirka Labada Dowladood,balse wuxuu cadeeyay inuu meel wanaagsan uu marayo. Madaxweyne Xasan ...
Xaalad cakiran oo ka taagan Gaalkacyo & G/mudug oo eedeysay P/land..
December 13, 2016	Leave a comment 25 Views
Guddoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee Puntland Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wali cakiran tahay xaalada magaalada Gaalkacyo una fulin heshiiskii sidii loogu talagalay. Wuxuu sheegay Guddoomiye Xirsi in wali xiran yahay Suuqa Gaalkacyo oo ay ku wada sugan yihiin Ciidamo kala taabacsan Puntland Galmudug oo mararka qaar rasaas isku ridaya. Guddoomiyaha ayaa sheegay in caqabada ugu ...
Page 10 of 176« First...«89101112	»	203040...Last »
Like Saar Page-keena
© Copyright 2016 All Right Reserved Developed By SOSTEC Inc